ETH/USD Better After Testing Technical Support at 1507: Sally Ho's Technical Analysis 23 February 2021 ETH | BitcoinEthereumNews.com
ETH / USD နည်းပညာအထောက်အပံ့ကို ၁၅၀၇ တွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက် ပို၍ ကောင်းသည်
Ethereum (ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) glided အနိမ့် ယနေ့အတွက် အာရှ pair တစုံအဖြစ် session ကို တန်ဖိုးလျော့ကျ အမှ 1655 အဖြစ်ကုန်သွယ်ပြီးနောက်ရိယာ မြင့်သော ထိုအဖြစ် 1805.03 area earlier during the အာရှ နှင့်အတူ session ကို intraday မြင့်မားသော ကိုယ်စားပြုတယ် စမ်းသပ် ၏ 100-bar ကို4နာရီရိုးရှင်းသောရွေ့လျားပျမ်းမျှအား. Traders knocked ETH / USD အောက်နိမ့် အမှ 1507.34 အဆင့်အထိ early in the week,amove that sawaစမ်းသပ် ၏ 61.8% ကိုပြန်လည်အဆင့်ဆင့် မကြာသေးမီက၏ အကွာအဝေးတန်ဖိုးထား မှ 1206.05 သို့ 2041.42. မှတ်တိုင်များ ခဲ့ကြ အောက်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည် များသော downside ပြန်ဆင့်အဆင့်ဆင့် အဆိုပါကာလအတွင်း တန်ဖိုးလျော့အပါအဝင် 1773.22, 1747.24, 1722.31, 1702.67, 1656.37, 1607.31, 1585.49နှင့် 1540.52။ အကယ်. ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၎င်း၏မကြာသေးမီကတိုးချဲ့ တန်ဖိုးလျော့, အလားအလာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု ပါဝင်သည် 1493.28, 1473.21, 1444.99, 1422.31, 1381.16, 1328.99, 1285.87နှင့် 1205.96.
မှတ်တိုင်များ မကြာသေးမီကခဲ့ကြသည် အထက်ရွေးကောက်တင်မြှောက် အ 1930.40, 1957.36နှင့် 2017.05 အဆင့်ဆင့် အဆိုပါကာလအတွင်း ကြေးဇူးတငျကွောငျးနှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများ သမိုင်းဝယ်ဖိအား အဆိုပါန်းကျင် 215.16, 370.50နှင့် 176.43 ဒေသများ။ မှတ်တိုင်များ မကြာသေးမီကခဲ့ကြသည် အထက်ရွေးကောက်တင်မြှောက် ထောက်စျေးနှုန်းရည်ရွယ်ချက်များ အဆိုပါအပါအဝင် 1711.20, 1716.45, 1733.12, 1750.63နှင့် 1805.21 အဆင့်ဆင့်, ထောက်စျေးနှုန်းရည်ရွယ်ချက်များ ခဲ့ကြ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသိသာ ၏အကောင့်ပေါ် ဝယ်ယူဖိအား ကြောင်းန်းကျင်အစပြု 148.08, 310.79, 439.77နှင့် 123.72 areas. If ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၎င်း၏တိုးချဲ့နိုင်ဖြစ်ပါတယ် အထက်သို့အကျိုးအမြတ်, အပိုဆောင်း ထောက်စျေးနှုန်းရည်ရွယ်ချက်များ အဆိုပါပါဝင်သည် 2080.48, 2134.98, 2150.66နှင့် 2210.42 အဆင့်ဆင့်။ ကုန်သည်များဖြစ်ကြသည် စောင့်ကြည့် ယင်းကြောင့် 50-bar MA (၄ နာရီ) is bullishly အထက်တွင်ညွှန်ပြ အ 100-bar MA (၄ နာရီ) နှင့် အထက် အ 200-bar ကို MA (4 နာရီ) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ 50-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 100-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) နှင့် အောက်တွင် အ 200-bar MA (တစ်နာရီလျှင်).
စျေးလှုပ်ရှားမှုအနီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် 200-bar ကို MA မှာ (4 နာရီ) 1598.71 နှင့် 50-bar ကို MA (အလုပ်ချိန်) မှာ 1860.19 ။
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့ ပတ်ပတ်လည်မျှော်လင့်ထားသည် 1493.28 / 1444.99 / 1381.16 နှင့် မှတ်တိုင်များ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခုခံ ပတ်ပတ်လည်မျှော်လင့်ထားသည် 2080.48 / 2134.98 / 2150.66 နှင့် မှတ်တိုင်များ အထက်မျှော်လင့်ထားသည်။
On 60 မိနစ် ဇယား, နင် is Bearishly SlowD အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စဉ်တွင် MACD is Bearishly MACDAverage အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော.
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ETH, ETHUSD, ဖေဖေါ်ဝါရီလ, တွင်, Sally, ထောက်ပံ့, စက်မှုလက်မှု, ဘာသာပြန်အတွက် စမ်းသပ်ခြင်း
ဗိုလ်မှူးကြီး Sanders ဘာပြောသလဲ လက်ဖက်ရည်ဥများ၊ Yum China တွင်ကြီးထွားမှုကိုကျွေးမွေးရန်အတွက်စီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာသည်
Coinotizia သည် Crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များသည်ကြီးမားသောဆုလာဘ်များဖြစ်နိုင်သည်